Magaalada New York ayaa ka dhigaysa tallaalka COVID-19 mid khasab ah dhammaan macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada dadweynaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Education » Magaalada New York ayaa ka dhigaysa tallaalka COVID-19 mid khasab ah dhammaan macallimiinta iyo shaqaalaha dugsiyada dadweynaha
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Duqa Magaalada New York Bill de Blasio
Amarka tallaalka COVID-19 ee Magaalada New York wuxuu daba socdaa siyaasad la mid ah oo uu soo rogay Guddoomiyaha New York ee xilka ka sii degaya Andrew Cuomo bishii Luulyo, kaasoo ku dhawaaqay in dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee safka hore ee isbitaallada ay dowladdu maamusho ay tahay inay qaataan jabinta Maalinta Shaqada, iyada oo aan lahayn ikhtiyaar tijaabo ah la siiyay.
Duqa Magaalada New York Bill de Blasio ayaa soo saaray waajibka tallaalka dhammaan shaqaalaha iskuulka dadweynaha.
De Blasio wuxuu ku ammaanayaa waajibka tallaalka inuu yahay hab lagu hubinayo in dugsiyadu “si aan caadi ahayn ammaan u yihiin”.
Chancellor -ka Dugsiyada Meisha Ross Porter ayaa ugu yeertay tallaalka waajibaadka “lakab kale oo ilaalin ah” oo loogu talagalay carruurta iyo shaqaalaha.
Shir jaraa'id oo uu qabtay maanta, Duqa Magaalada New York Bill de Blasio wuxuu ku dhawaaqay isbeddel siyaasadeed oo ka yimid xeerkiisii ​​hore kaas oo siiyay macallimiinta, iyo sidoo kale shaqaalaha kale ee magaalada oo dhan, ikhtiyaarka ah in la tallaalo ama la qaado imtixaannada toddobaadlaha ah, wuxuuna caddeeyay in dhammaan NYC macallimiinta dadweynaha iyo shaqaalaha kulliyaduhu waa inay qaataan tallaalka COVID-19 sannad dugsiyeedkan si loo hubiyo in goobaha waxbarashadu ay yihiin “kuwo si aan caadi ahayn ammaan u ah.”
Sida laga soo xigtay De Blasio, the waajibka tallaalka waa habka ugu wanaagsan ee lagu hubin karo in dugsiyadu yihiin “kuwo si xad dhaaf ah ammaan u ah” iyadoo la siinayo waxa Madaxa Dugsiyada Meisha Ross Porter ku tilmaantay “lakab kale oo ilaalin” oo loogu talagalay carruurta iyo shaqaalaha.
In kasta oo uu ku dhawaaqay in macallimiinta lagu qasbi doono inay qaataan tallaalka, duqa NYC ma uusan qeexin ciqaabta lagu soo rogi doono kuwa diida inay qaataan tallaalka. Macalimiinta ku xadgudbay xeerkii hore waxay halis ugu jireen inay helaan ganaax aan la bixin.
Madaxweynaha Xiriirka Macallimiinta Midowday Michael Mulgrew ayaa ka jawaabay waajibaadka tallaalka cusub isagoo aqbalay baahida loo qabo in “carruurta la badbaadiyo iskuulladuna furan yihiin,” laakiin wuxuu ku dooday in ka -reebitaan caafimaad la heli karo wuxuuna ugu baaqay de Blasio inuu la shaqeeyo ururada shaqaalaha si loo xaliyo wixii tabasho ah.
The New York City Waajibaadka tallaalka COVID-19 wuxuu daba socdaa siyaasad la mid ah oo uu soo rogay Guddoomiyaha New York ee xilka ka sii degaya Andrew Cuomo bishii Luulyo, kaasoo ku dhawaaqay in dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka safka hore ee isbitaallada ay dowladdu maamuli doonto ay heli doonaan jabinta Maalinta Shaqaalaha, iyada oo aan la bixin ikhtiyaar tijaabo.
Go'aanka Cuomo wuxuu daboolay 130,000 oo shaqaale dawladeed ah, iyadoo kuwa la saameeyay la filayo inay qaataan labada tallaal ee Pfizer ama Moderna, ama ikhtiyaarka hal-jab Johnson & Johnson.